Larizza de Vera's Lahatsoratra momba Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Larizza de Vera
Sabotsy, Oktobra 31, 2020 Sabotsy, Oktobra 31, 2020 Larizza de Vera
Nandritra izay taona vitsy lasa izay dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny fomba fampiasantsika ny Internet amin'ny marketing nomerika. Nanomboka tamin'ny famoronana tranokala fotsiny izahay hatreto mba hananana angon-drakitra sy hetsiky ny mpampiasa. Miaraka amin'ny fifaninanana mahery vaika eo amin'ny sehatra nomerika, ny fanapahana tranonkala dia tsy hanapaka azy fotsiny. Ireo mpivarotra dizitaly dia tsy maintsy manatsara ny lalao mba hiavaka amin'ny tontolo miovaova ankehitriny. Ny marketing amin'ny tontolon'ny nomerika dia tsy mitovy amin'ny
Ny marketing dia asa mitohy. Na orinasa orinasa ianao na orinasa kely, ny marketing dia fomba iray lehibe hitazonana ny orinasam-pandraharahana ary koa manampy amin'ny fitarihana orinasa mankany amin'ny fahombiazana. Zava-dehibe ny fiarovana sy ny fitazonana ny lazan'ny marikao mba hametrahana fanentanana ara-barotra mirindra ho an'ny orinasanao. Saingy alohan'ny hamoahana fampielezan-kevitra ara-barotra stratejika, ny mpivarotra dia mila mahatsapa tanteraka ny sanda ary koa ny